Myanmar rebuts Dhaka Declaration’s reference on situation in Rakhine State – Ministry of Foreign Affairs
The 45th Session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) held in Dhaka from5to6May 2018 issued the Dhaka Declaration expressing concern over alleged human rights violations by security forces in Myanmar.
The Declaration lacks balance and fairness, and fails to denounce the brutal attacks of the terrorist group, the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) which triggered the humanitarian situation unfolding today.
Myanmar categorically rejects the irresponsible labelling of “ethnic cleansing” or “State backed violence” to describe events in Rakhine State. More than 50% of the Muslim community, which representsamajority in Maungtaw Region, have remained in their villages.
The Government has stated time and again that no violation of human rights will be condoned. Allegations supported by evidence will be investigated and action taken in accordance with the law.
It is highly regrettable that the Dhaka Declaration did not even mention the immediate need for the repatriation of displaced persons from Rakhine in accordance with the bilateral agreement between Myanmar and Bangladesh. Nor were there any suggestions aimed at promoting harmony and sustainable development in the Rakhine State.
As the monsoons are approaching, Myanmar is now focusing on expediting the repatriation process. To that end, Myanmar urges Bangladesh to take all necessary steps to help the process in accordance with the said agreement.
Myanmar stands ready to facilitate the voluntary, safe and dignified return of the displaced persons from Rakhine.
Dated. 11 April 2018
ဒါကာကြေညာချက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အခြေအနေအား ရည်ညွှန်းဖော်ပြ ခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံက တုံ့ပြန်၊
ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်း အမြန်စတင်ရေးအတွက် စစ်မှန်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အား တိုက်တွန်း
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်မှ ၆ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် (၄၅) ကြိမ်မြောက် အစ္စလာမ်မစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (အိုအိုင်စီ) နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ဒါကာ ကြေညာချက်တွင် မြန်မာလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု စွပ်စွဲချက်များအပေါ် စိုးရိမ် ပူပန်ကြောင်း ဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်။
ယင်းကြေညာချက်မှာ ဟန်ချက်ညီမျှမှု၊ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့သည့်အပြင် ယနေ့ကြုံတွေ့နေရသည့် လူသားချင်းစာနာမှု အခြေအနေများကို စတင်ဖြစ်ပွားစေခဲ့သော Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) အမည်ရှိ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့၏ ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကိုမူ ရှုတ်ချခြင်း အလျဉ်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဖြစ်စဉ်များအား “လူမျိုးစုသုတ်သင်ရှင်းလင်းမှု”၊ “အစိုးရအားပေးသည့် အကြမ်းဖက်မှု” ဟူသော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် တာဝန်မဲ့စွာ ဖော်ပြခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြတ်သားစွာ ပယ်ချပါသည်။ မောင်တောဒေသတွင် မွတ်စလင် အသိုက်အဝန်းမှာ လူများစုဖြစ်ပြီး၊ ယင်း၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ ယင်းကျေးရွာများတွင် ဆက်လက်နေထိုင်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကို ခွင့်လွှတ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ခိုင်မာသော အထောက်အထားရှိသည့် စွပ်စွဲပြောကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကာကြေညာချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက် အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား အမြန်ပြန်လည် လက်ခံရေးလုပ်ငန်း စတင်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေမှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သဟဇာတဖြစ်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဦးတည်သည့် အကြံပြုမှုများ တစ်လုံးတစ်ပါဒမျှ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသည်မှာ အထူး စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ မုတ်သုံကာလ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား ဆောလျင်စွာ စတင်နိုင်ရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်နှင့်အညီ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ် စတင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအား မြန်မာနိုင်ငံက တိုက်တွန်းပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား မိမိဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်းစွာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်ပြန်လာနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၉ ရက်။